Satroka boribory azo ovaina miaro amin'ny masoandro amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena sy ny mpamatsy tennis , resintsika noho ny
2. Fanidiana ny Hook sy Loop
4. Fitaovana: Polyester, fitaovana maivana ary ahazoana aina, miaraka amin'ny fehikibo malefaka mifoka.
5. Endri-javatra: satroka visor feno vaky azo esorina, manana fiarovana UV masoandro tsara.
6. Habeny: ity satroka fanatanjahan-tena miaro amin'ny masoandro miovaova ho an'ny filalaovana tenisy golf ity, ny habe iray dia mifanaraka indrindra. Miaraka amin'ny fanakatonana lamina miverina Velcro.
7. Fotoana: ny satroka Sun Visor fanatanjahan-tena amin'ny masoandro dia tsara ho an'ny fanatanjahan-tena any ivelany mandritra ny fahavaratra, toy ny tenisy, golf, hazakazaka, jono, fitsangatsangana, jogging, sns ...
★ Tongasoa ny kaomandy OEM anao momba ny Hat Adjustable Breathable Sun Protection Sports Visor Hats ho an'ny Golf Tennis.
ambany Misy satroka Sun Visor Sports Sports Visor hafa ho an'ny Tenisy Golf, raha liana amin'izany ianao dia andefaso anay ny kaody raha tsy manilika anao ny Sun Protection Sports Visor Hats, azafady mba alefaso aminay ny fahamendrehanao na ny santionanao.
Ireto ambany ireto ny fanamarinana nandalo
Teo aloha: Fitaovana fitsangatsanganana an-kalamanjana an-kalamanjana miaraka amin'ny fonony azo esorina amin'ny harato
Manaraka: Saron-doha vita amin'ny pataloha mafana amin'ny ririnina ho an'ny zazavavy zazalahy
Sarin'ny lehilahy Dada C ...
Azo ovaina ny lehilahy ...